Teregiramu ichavhura yakachengeteka vhidhiyo kufona pamberi pekupera kwegore | IPhone nhau
Iyo coronavirus iri kuchinja nzira yatinotaurirana, kudzidzisa uye kushanda. Mabhiriyoni evanhu vari telecommuting, mamirioni avanhu vasina kuenda kukirasi kana kuyunivhesiti uye mamirioni emhuri vasingakwanise kuonana. Nekudaro, isu tine ace kumusoro kwedu ruoko inova tekinoroji, vhidhiyo kufona uye mameseji maficha. Imwe yeanonyanya kufarirwa ndeye Teregiramu. Maawa mashoma apfuura ndakazivisa iyo inosvika mazana mana evashandisi vanoshanda. Uye zvakare, ivo vakasimbisa izvo akachengeteka mavhidhiyo mafoni achauya kune iko kunoshanda mukati megore rino 2020.
Iyo yekuvandudza kubva Teregiramu ine COVID-19 mupfungwa
Imwe yeakanyanya kunaka kunaka kweTeregiramu ndiyo huwandu hwezvinhu zvitsva izvo zvinowedzerwa mune yega yega yekuvandudza. Uye zvakare, ivo vari mukutarisira kwekuvaratidza nenzira yakasarudzika, sekunge yaive nyaya yausingagone kumira kuverenga. Kune rimwe divi uye kutora mukana weiyo nyowani vhezheni yeapp, iyo mameseji kunyorera yakazivisa kusvika kune iyo 400 mamirioni vanoshandisa vanoshanda pasirese neavhareji ye 1,5 mamirioni vashandisi vatsva pazuva.
Ikozvino iko kukiyiwa kwepasirese kwakaratidza kudikanwa kweyakavimbika vhidhiyo yekutaurisa chishandiso. Vhidhiyo yekufona muna 2020 yakafanana chaizvo nekutumira mameseji muna2013. Kune maficha ari kuchengeteka kana ne usability yakanaka, asi kwete ese ari maviri. Tinoda kugadzirisa izvozvo, uye isu tichaisa pfungwa pakukupa iwe yakachengeteka yeboka vhidhiyo mafoni en 2020.
Zvizhinji zvekuvandudzwa zvakaburitswa neTeregiramu zvinotenderera ipa sarudzo kuapp panguva yekuvhara. Imwe yenyaya idzi yave iri iyo kuvhurwa kwechengetedzo yevhidhiyo mafoni kusati kwapera gore. Uye zvakare, ivo vatora mukana wekutanga dhi ine chepfu kune ese iwo maapplication ayo asingape chengetedzo uye kugona kwakanaka panguva imwe chete. Naizvozvo, iyo ndege ndege yemagariro network ine chinangwa chekuve iyo app inoshandura iyo paradigm yevhidhiyo yekufona sezvatinozviziva isu.
Pamusoro peichi chiziviso, a kukwikwidza nemubairo we400.000 euros pakati pemibvunzo yese yevanogadzira mibvunzo pane yako @QuizBot bot. Teregiramu inoti nevadzidzi vanopfuura mabhiriyoni maviri kunze kwekirasi, zvakafanira kuve nemidziyo yepamhepo inodzivirira kurasikirwa neruzivo runodzidziswa mumakirasi Kuti vaite izvi, ivo vakatanga chirongwa chakabatana ku gadzira dhatabhesi yemibvunzo yekudzidzisa yemarudzi ese mukati mebhodhoro rako.
Kune rimwe divi, ivo vakawedzera chinamirwa chekutsvaga injini kwatinogona kutsvaga chakanakira pakati peanopfuura makumi maviri ezvimiti zvakanyorerwa kusvika pari zvino. Pakupedzisira, kugadzirisa kwakawedzerwa kune dhizaini yeTeregiramu app pane macOS. Uye yakasarudzika animated bullseye emoji yakawedzerwa pane ese mapuratifomu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Teregiramu kuvhura yakachengeteka vhidhiyo mafoni kusati kwapera gore
Imran Chaudhri anotsanangura ruzivo rwekuti Apple Watch yakagadzirirwa sei